Arsenal Ma Kaftan Ayay Suuqa Ka Wadaa?, Dalabkii Zaha Ee Lala Yaabay Oo Ay U Xigtay Dalab Ay Ka Gudbiyeen Xidiga Kooxaha Reer Manchester Ku Tartamayaan Ee Harry Maguire. - Gool24.Net
Arsenal Ma Kaftan Ayay Suuqa Ka Wadaa?, Dalabkii Zaha Ee Lala Yaabay Oo Ay U Xigtay Dalab Ay Ka Gudbiyeen Xidiga Kooxaha Reer Manchester Ku Tartamayaan Ee Harry Maguire.
Arsenal ayaa waxyaabo qariib ah ka samaynaysa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda kuwaas oo keenay in su’aalo layska waydiiyo sida ay daacad uga yihiin rabitaankooda xidigaha ay dalabyada ka gudbiyeen.
Arsenal ayaa dood ku abuurtay qaabkii ay kooxda Crystal Palace uga dalbatay Wilfried Zaha kaas oo ay ka gudbiyeen lacag kala badh ka ah qiimaha ay Crystal Palace xidigan ku doonayso isla markaana ay waliba Gunners doonayeen in ay muddo shan sanadood ah ku kala bixiyaan.
Waxay taasi keentay in Crystal Palace ay colaad u qaado maamulka Gunners isla markaana ay ku eedeeyeen in ayna doonayn in ay xidigan la wareegaan balse ay doonayaan in ay deganaansho la’aan ku abuuraan.
Laakiin waxaa hadda soo baxay war kale oo sheegaya in Arsenal ay dalab 50 milyan gini ah ka gudbisay difaaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire xili ay warbaahinta England shaaciyeen in kooxda Liecester ay soo diiday dalab 70 milyan gini ah oo ay Man United isla xidigan ka gudbisay.
Arinta layaabka leh ayaa ah in maamulka Arsenal ay dalabkooda Harry Maguire ee 50 ka milyan ku qiimaysan gudbiyeen xili ay kooxda Foxes iska diiday dalab 70 milyan ah.
Dhinaca kale dalabka Arsenal iyo lacagta ay Leicester City ku qiimaynayso Harry Maguire waxaa ugu yaraan u dhexeeya 35 milyan milyan ilaa 40 milyan gini taas oo sidii Zaha oo kala ah kala badhka qiimaha xidiga ay doonayaan la dul dhigay.
Lama oga haddii ay Arsenal siyaasad gaar ah ka leedahay nooca dalabyada hoose ee ay ka gudbinayso ciyaartoy lacago badan la dul dhigay iyo in ay taageerayaasha kooxdooda ee cadhaysan ku dajinayaan in ay haddaba xaalad cusub u abuuraan.
Kooxaha Manchester United iyo Manchester City ayaa hadda dalab isku mid ah oo min 70 milyan gini ah ku doonaya saxiixa Harry Maguire kaas oo la xaqiijiyay in uu Man City doorbidayo sababtoo ah in ay Champions league ku jiraan.
Laakiin Arsenal oo aan Champions league u hayn Harry Maguire in ay dalab 50 milyan ah u dirtay Leicesster City ayaa ah mid la sii ogyahay in ayna waqti ku qaadan doonin maamulka Foxes in ay iska diidaan.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo hore loo shaaciyay in lacagta ay Arsenal suuqa u haysataa tahay 45 milyan gini isla markaana ayna wali ciyaartoy ay lacag ka samayso helin, waxaa jira su’aalo layska waydiin karo nooca dalabyada maamulka Emirates Stadium ee ay xidigo qaali ah ka gudbiyeen.